विभाजनपछि प्रचण्डको विश्लेषण : चिज गम्भीर छ फेरि एकचोटि भीषण संघर्ष गर्ने अवस्था आउन सक्छ - Himali Patrika
विभाजनपछि प्रचण्डको विश्लेषण : चिज गम्भीर छ फेरि एकचोटि भीषण संघर्ष गर्ने अवस्था आउन सक्छ
हिमाली पत्रिका १० पुष २०७७, 8:20 am
काठमाडौं । पार्टी विभाजनको औपचारिकता पूरा गर्दै नेकपाका दुई समूहका बेग्लाबेग्लै बैठकहरु बिहीबार सम्पन्न भएका छन् । बैठकको अन्त्यमा ओली र प्रचण्ड दुवैले आ–आफ्नो समूहलाई सम्बोधन गर्दै भाषण गरे । प्रचण्ड–माधव समूहमा अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रचण्डले प्रतिगामी षड्यन्त्र सुरु भएको भन्दै जीवन–मरणको संघर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नबारे निर्णय लिनुपर्ने बेलामा अदालतले पुस १४ गते नेकपाको नामसम्बन्धी पेसी तोकेको बताउँदै प्रचण्डले प्रतिगामी षडयन्त्रको गन्ध ह्वास्सै आएको बताए ।
दिउँसो बल्खु पुगेर मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पणसमेत गरेका प्रचण्डले गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कार्यकर्ताहरुलाई फेरि एकचोटि संघर्षमा उत्रन आह्वान गरे । संघर्ष नगर्ने हो भने प्रतिगमनलाई रोक्न नसकिने प्रचण्डले निष्कर्ष सुनाए ।
‘अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र विघटनको स्वीकृतिसँगै जुन राजनीतिक संकट देशमा देखा परेको छ, म यसका बारेमा केही कुराहरु कमरेडहरुलाई अलि गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी ठानेको छु’ बैठकको समापन मन्तव्यमा प्रचण्डले भने, म कमरेडहरुलाई जोड दिएर भन्न चाहन्छु, ‘मेरो अध्ययन, विश्लेषण र घटनाक्रम नजिकबाट नियालेर हेर्दा यो पार्टीभित्रको सामान्य अन्तरसंघर्ष मात्र होइन । कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई निस्तेज गर्ने र प्रतिगमनको आधार तयार पार्ने ठूलो डिजाइनअन्तर्गत नै यी सबै नाटकहरु मञ्चन भएका हुन् ।’
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रचण्डको विश्लेषण उनकै शब्दमा (सामान्य भाषा सम्पादनसहित) यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–
वामदेवले समय माग्नुभएको छ, बादललाई ल्याउन सकेनौं २३ जना फर्कनुभयो
सबैभन्दा पहिले मैले अस्तिको दिन केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा अर्को बैठकसम्म त्यहाँ काहीँ न काहीँ केही वरिष्ठ नेता कमरेडहरु, खासगरी कमरेड वामदेव गौतम र कमरेड रामबहादुर थापा बादलसमेत उपस्थित हुने आशा व्यक्त गरेको थिएँ । तर, आज उहाँ यहाँ आइपुग्नु भएको छैन ।
कमरेड वामदेव गौतमले अझै छलफल गर्ने, अझै केही समय चाहिने भनेर मेरो हिजो कुराकानी भएको छ । हाम्रो छलफल सकारात्मक दिशामा छ । आज बिहानमात्रै पनि केही कमरेडहरुले कुरा गर्नुभएको र सकारात्मक छलफल भएको सूचना अहिले भर्खरै पनि मलाई प्राप्त भएको छ ।
कमरेड रामबहादुर थापा बादलको भने अझै स्थिति क्लियर भएको मैले थाहा पाएको छैन । अब उताको बैठकमा गइसक्नुभयो भन्ने तपाईंहरुले भर्खरै थाहा पाउनुभएछ । त्यसकारण हामीले उहाँलाई ल्याउन सकेनौं ।
आज यो बैठकसम्म आउँदा अस्तिका दिन उता (ओली समूह) को बैठकमा सामेल गरिनुभएका, कोही उपस्थित हुनुभएका र कोही उपस्थित नहुनुभएका मध्ये २३ जना कमरेड फर्किनुभएको छ । उहाँहरुले वक्तव्य दिएर हामी त्यहाँ छैनौं भन्नुभएको छ ।
यो बैठकमा सहभागी आजै चारजना महत्वपूर्ण कमरेडहरु अस्ति सहभागी हुनुहुन्थेन, आज सहभागी हुनुहुन्छ । अघि नै यहाँ तपाईंहरुले ताली बजाएर स्वागत गरिसक्नुभयो । कमरेड शेरबहादुर तामाङ, कमरेड दिनेश पन्थी र कमरेड बादलसँग असाध्यै निकट रहेर केही वर्षदेखि काम गर्दै आउनुभएका र यसबीच कमरेड बादलसँग घनिभूत अन्तर्क्रियामा रहनुभएका महत्वपूर्ण दुईजना कमरेडहरु पनि आज यस बैठकमा सामेल हुनुभएको छ, ती कमरेडहरु मध्ये कमरेड कुलप्रसाद केसी सोनाम । उहाँ आज सामेल हुनुभएको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु ।
तर, प्रतिगमनकारीहरु अनेक जालझेल षड्यन्त्र गरेर कहिँ न कहिँ आधिकारिताको विवादलाई पछाडि धकेल्ने गन्ध ह्वास्सै आएको छ कमरेडहरु ।
दस्तावेज छिटै ल्याउँछु
मैले अस्ति नै कुरा राख्ने क्रममा एउटा डकुमेन्ट वितरण गर्ने पनि मैले अभिव्यक्त गरेको थिएँ । खास गरी ४० पृष्ठ लामो, ३८ पृष्ठको आरोपको खण्डन भनौं या स्पष्टीकरण या टिप्पणी राख्ने कुरा गरेको थिएँ ।
हिजो तयारी गर्दा त्यो टिप्पणी र स्पष्टीकरण केपी ओलीको समेत सहभागितामा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरिएको थियो । अब केपी ओलीको अनुपस्थितिमा र यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नका लागि केही परिमार्जन आवश्यक हुन गयो । त्यसले गर्दा म कमरेडहरुलाई केही दिनभित्रै छिट्टै नै त्यसलाई परिमार्जन गरेर तपाईंहरु कहाँ पुर्‍याउने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
यति भनिसकेपछि हामी बैठकलाई धेरै लामो बनाउनेतिर पनि छैनौं । हामीले एजेण्डा पारित गरिसकेका छौं । संगठनको पनि र आन्दोलनको कार्यक्रम पनि हामीले निर्णय गरिसकेका छौं ।
हामीले संगठन र आन्दोलन परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम पारित गरिसकेका छौं । त्यसकारण मैले यसबारे धेरै भन्नुपर्ने केही पनि छैन ।
कमरेडहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु– चिज गम्भीर छ
आज म अलि फरक ढंगले कमरेडहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । अहिले हाम्रो पार्टीमा जुन संकट देखा पर्‍यो, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र विघटनको स्वीकृतिसँगै जुन राजनीतिक संकट देशमा देखा परेको छ, म यसका बारेमा केही कुराहरु कमरेडहरुलाई अलि गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी ठानेको छु ।
हाम्रा उपलब्धिहरुको जबर्जस्ती हत्या गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अपहरण गरिएको छ, हत्या गरिएको छ । हामी मर्दै नमरेका मान्छेहरुलाई मरेको घोषणा गरिएको छ । इतिहासका तमाम गौरबहरु, जो हामीले हासिल गर्‍यौं, जनताका बीचमा आन्दोलन गर्दै जाँदा जे प्राप्त गर्‍यौं, तिनको रक्षाका लागि एकचोटि पूरै तागतका साथ संघर्षको मैदानमा, जरुरी पर्छ भने जुझारु संघर्षको मैदानमा जानु छ । हिंसात्मक होइन, जुझारु संघर्ष ।
अर्को पक्ष (ओली पक्ष) लाई झूटमुट कुरा जति गरे पनि हुँदोरहेछ । कति झूट बोले भन्ने झलक मैले अस्ति कमरेडहरुका अगाडि राखेको थिएँ । यति झूट बोल्न सक्ने पनि हुँदोरहेछ भनेर भनेको थिएँ, त्यसलाई दोहोर्‍याउन चाहन्नँ । तर, अहिले जे भइरहेको छ, त्यो भने यथार्थमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालका क्रान्तिकारी जनताले गरेको संघर्ष, बलिदान र त्यसका उपलब्धिहरुलाई अपहरण गर्ने एउटा डिजाइनमा भएकोमा म विश्वस्त छु ।
भीषण संघर्ष गर्ने अवस्था आउन सक्छ
म पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुको नाताले पार्टी एकता बचाउन पटक–पटक गरिएको धेरै नै पीडा र अपमान सहेर भए पनि बच्नु, बचाउनुपर्छ, किनभने यो व्यक्तिको कुरा होइन । यो आन्दोलनको कुरा हो, यो राष्ट्रको कुरा हो, यो जनताको कुरा हो भनेर पहल गर्दैगर्दा अन्तिम समयमा जादुगरी तारिकाले संवैधानिक परिषदको बैठक भएको छैन, पदाधिकारी नियुक्ति गरेको पनि छैन भनेर स्थायी कमिटीका झण्डै ५० जना कमरेडहरुसँग झुट बोल्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? गरिसक्या रहेछन् नि त । अनि, अर्को अध्यक्षले म विकल्पसहित आउँदैछु, पार्टी विभाजन हुन दिन भएन भन्दाभन्दै गएर संसद् विघटन गर्न किन पर्‍यो ?
आज हामीले संकल्प गर्नु छ । कमरेडहरुलाई अपिल गर्छु– मैले अहिले हाम्रो कुनै वैधानिक संस्थालाई आरोपित गरेको छैन । तर, मैले खबरदारी चाहिँ गर्न चाहेको छु । खबरदार ! संविधानको अपहरण नगरियोस् ।
सात दशक लामो लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, मार्क्सवादीहरु मिलेर गरेको संघर्षको परिणामबाट बनेको संविधानलाई अपदस्त गर्न खोजिएकै हो त ? विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय सबैको समावेशी लोकतन्त्र खोस्नै खोजिएको हो त ? विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको सिंहदरबारको अधिकार खोस्नै खोजिएको हो त ?
मैले भन्ने गर्छु– जन्माउने एउटा परियो गणतन्त्र जन्माउने नेतृत्व, कार्यकर्ता, लडाईं लड्ने सबै त्यो गणतन्त्रको जिम्मा गणतन्त्र विरोधीलाई दिइयो क्या ! हामीले भूल त्यहीँ गर्‍यौं । सबै दिइएछ क्या फेरि ! प्रधानमन्त्री मात्रै दिन पाएको भए पनि कम दुःख पाइन्थ्यो होला, सबै बुझाइएछ । तर, हामीले हाम्रो विचारचाहिँ बुझाएका छैनौं । हामीले राजनीति बुझाएका छैनौं, एजेण्डा बुझाएका छैनौं । हामीले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी बुझाएको होइन । हामीले बृहत राष्ट्रिय एकताका लागि भनेर त्याग गरेको हो । फेरि एउटा त्याग गरेको हो, यसमा कमजोरी नठानियोस् ।
बामदेवजीले भन्नुभएको थियो क्या, स्थायी समितिको एउटा बैठकमा, मूर्खदेखि दैव डर… यो कस्तोखालको मान्छे पर्‍यो भनेर एकचोटि भाषण गर्नुभाथ्यो केपीजीका बारेमा । मलाई कहिलेकाहीँ यो मूर्ख … के भन्न सकिन्छ र !
यो (संसद विघटन) बहादुरले गर्ने काम त होइन । मेरो विचारमा यो कायरले गर्ने काम हो । बहादुरले त बहादुरीपूर्वक संसदमा गएर ल ल्याउने हो त मेरो विकल्प भन्न सक्नपर्थ्यो नि । बहादुरी त त्यो हुन्थ्यो नि ।
मैले पार्टीलाई अस्तिका दिन हामी सबै नेताहरु भएका बेलामा ३/४ वटा कुरा राखेको छु । एउटा त हामी सबै माननीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर, त्यसो गर्दा झण्डै २ सय हस्ताक्षर हामीले जम्मा पार्न सक्ने अवस्थामा हामी रहेछौं । त्यो हस्ताक्षर लगेर सर्वाेच्च अदालतलाई निवेदन दियो भने त्यसले एउटा अर्थ राख्छ ।
अत्यधिक बहुमतचाहिँ यसको खिलापमा छन् भन्ने कुराको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियरुपमा बुझिने प्रमाण हुन्छ । हामीले आ–आफ्नो ढंगले गर्ने कार्यक्रम त छँदैछ, गरौं । संयुक्तरुपले गरिने कार्यक्रम पनि गरौं ।
संयुक्तरुपले गर्ने कार्यक्रमले दिने सन्देश अर्काे हुन्छ, त्यो गरौं । अर्काे, आउने दिनमा हामी यो पार्लियामेन्टलाई कसरी लैजाने र सरकार कसरी गठन गर्ने र कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा पनि सोच्न थालौं । मैले यी तीन चारवटा कुरा राखेको छु र पार्टीहरूले यसलाई आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिमा राखेर आ–आफ्नो ढंगले निर्णय गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ ।